Fikasana fitsaram-bahoaka :: Polisy nataon’ny andian’ olona hazalambo - ewa.mg
Fikasana fitsaram-bahoaka :: Polisy nataon’ny andian’ olona hazalambo
News - Fikasana fitsaram-bahoaka :: Polisy nataon’ny andian’ olona hazalambo
L’article Fikasana fitsaram-bahoaka :: Polisy nataon’ny andian’ olona hazalambo est apparu en premier sur AoRaha.
Nivoaka tamin'ny : 03/08/2020
Filoha Rajoelina tany Toliara : nahazo tambiny fampirisihana ireo mpiasan’ny fahasalamana
Namanaran’ny filoha Rajoelina mivady ny fitsidihany ny tany Toliara ny fanomezana ny Tosika fameno, niarahany amin’ny solontenan’ny Pam. Miisa 23 000 ireo tokantrano marefo mahazo ny 100 000 Ar. Mitentina valo tapitrisa dolara ny fanampian’ny Pam hanaovana ny Tosika fa­meno. Anisan’ny sokajin’olona nisitraka izany ny mpanasa lamba sy ireo mpibata entana. Nialoha izany, nitsidika ny hopitaly manara-penitra Mi­tsinjo Betanimena – Toliara ny filoha ary nanoloatra fitaovana, « concentrateur d’oxygène » sy fanafody ilaina amin’ny ady amin’ny Covid-19. Anisan’izany koa ny tambavy CVO. Notoloran’ny filoha ny tambiny fandrisika koa ireo mpiasan’ny fahasalamana tsy ankanavaka, manomboka amin’ny mpiandry vavahady ka hatrany amin’ireo mpitantana rehetra.Hazavana ho an’ny rehetra Ankoatra izany, nisy ny hetsika sosialy nataon’ny va­din’ny filoha sady filohan’ny fikambanana Fitia, Rajoelina Mialy. Nanolotra ny jiro « Ha­zavana ho an’ny rehetra » ho an’ny renim-pianakaviana ao amin’ny fokontany Mahavatse II izy. Miisa 200 kosa ireo tokantrano nisitraka ny hazavana ho an’ny rehetra ao amin’ny fokontany Ankiambe.Synèse R. sy CMSL’article Filoha Rajoelina tany Toliara : nahazo tambiny fampirisihana ireo mpiasan’ny fahasalamana a été récupéré chez Newsmada.
FAHASARONANA ASA RATSY :: Azo sary mialoha ilay lehilahy saika hamaky trano
Noraisim-potsiny ity lehilahy nikasa hamaky trano iray, teny Ankerana, ny alin’ny sabotsy hifoha ny alahady lasa teo. Tazana tao amin’ny horonantsary voarain’ny fakantsary miafina ny sariny mivezivezy eo an-tokontany toy ny mitady fomba hidirana ao an-trano. Nampandre ny mpitandro filaminana ny tompon-trano. Teny an-dalana hamonjy ny antso vonjy ny pôlisy no nifanena tamin’ ny lehilahy iray nampiahiahy. Nosavaina ity farany. Nahitana fitaovana maromaro toy ny fanoitra teny aminy. Noentina avy hatrany hatao famotorana izy. Tamin’izay no naha-fantarana fa io ilay lehilahy azo sary nihaodihady teo amina tranon’olona iray, izay nampandre ny mpitandro filaminana. «Niaiky izy fa saika hamaky trano. Vao avy novidiany hanapitsohana varavarana ireo fitaovana tratra teny aminy ireo. Nambarany ihany koa fa efa nivezivezy teny Ankerana izy, ny harivarivan’ny sabotsy, nijery izay trano hovakiany», araka ny tatitra avy amin’ny pôlisy. L’article FAHASARONANA ASA RATSY :: Azo sary mialoha ilay lehilahy saika hamaky trano est apparu en premier sur AoRaha.
Tetezan’i Bekiraro: sarona ilay jiolahy raindahiny amin’ny fanendahana
Jiolahy iray ikoizana amin’ny asa fanendahana miharo fitondrana zava-maranitra no saron’ny polisy tetsy amin’ny tetezan’i Bekiraro, omaly maraina tamin’ny 5 ora sy sasany. Naharay fitarainana ny eo anivon’ny polisy CSP IV fa nisy roa lahy nanendaka teo amin’ny lalana akaikin’ny FJKM Ambalavao Isotry tokony ho tamin’ny 7 ora sy sasany hariva. Lasan’ireo olon-dratsy tamin’izany ny sakaosy nisy ny finday marika avo lenta Samsung Note 5 sy ny vola nitentina efatra alina Ar niampy antontan-taratasy maromaro. Nanao ny fanadihadiana sy ny fikarohana avy hatrany ireo mpanendaka ny Polisy ka tra-tehaka tetsy amin’ny tetezan’i Bekiraro ny lehilahy iray. Nandritra ny fanadihadiana natao azy, fantatra fa efa mpamerin-keloka ary avy namita sazy teny amin’ny fonjan’Antanimora ny tenany izao voasambotra izao.Tsiferana R.L’article Tetezan’i Bekiraro: sarona ilay jiolahy raindahiny amin’ny fanendahana a été récupéré chez Newsmada.
Maro ireo nisedra olana tao anatin’ny fihibohana indroa miatoana. Tsy afa-bela amin’izany ny eny anivon’ny fiarahamonina sy ny tokantrano. Tonga eny amin’ny fitsarana ny raharaha matetika. Ohatra amin’izany ny trosa sy ny hofan-trano…Betsaka ireo olana samihafa eny anivon’ny tokantrano tao anatin’ny fihibohana noho ny hamehana ara-pahasalamana amin’ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19. Anisan’izany, ohatra, ny fitakiana trosa, ny amin’ny ady tany, ny fampiakarana ny raharaha amin’ny didim-pitsarana tsy mahafa-po, araka ny nambaran’ny tompon’andraikitra eo anivon’ny fitsarana. Niantraika mivantana tamin’ny ankamaroan’ny olona ny takaitra navelan’ny covid-19. Tao ireo very asa, ny herisetra amin’ny endriny samihafa. Ny tsy fahampian’ny fidiram-bola eo anivon’ny tokantrano noho ny fandaminana any am-piasana… Tsy mahagaga raha tafiditra amin’ny trosa ny maro. Tsy nahavita firy ireo tosika samihafa natao.“Maro ireo mampiditra raharaha momba fitakiana hofan-trano, ny olana momba ny fahafatesana ray na reny, ilàna fahazoan-dalana eny anivon’ny fitsarana manendry ny sisa velona, ny ray na ny reny na ny zanany. Tena manaraka ny filaharana ireo olona manan-draharaha eny amin’ny fitsarana amin’izao”, hoy ny lehiben’ny firaketan-draharaha eny anivon’ny fitsarana, Antananarivo, ny Me Herinatrehana Inham Ella, teny Anosy, omaly.Fandaminana sy filaharana…Manoloana izany, hapetraka ny fandaminana amin’ny fiverenan’ny raharaham-pitsarana aorian’ny fihibohana noho ny hamehana ara-pahasalamana. Mandeha aloha ny famoahana didim-pitsarana tokony hivoaka. Mandeha ny raharaham-pitsarana amin’ny antontan-taratasy tranainy sy ny fifanomezana fehinteny avy eo. Aorian’izany ny raharaha vaovao. Tokony ho tonga mialoha ireo hanatrika famoahana ny didim-pitsarana. “Rehefa mametraka ny fampahafantarana ny filaharan’ny raharaham-pitsarana tokony handeha any amin’ny efitra fitsarana ny mpirakidraharaha, misy ny filazana amin’ireo miditra amin’ny fizarana voalohany, faharoa, fahatelo”, hoy ihany izy.R.Nd. sy Synèse R.L’article Olan’ny fiarahamonina nateraky ny covid-19: maro ireo fitakiana trosa sy hofan-trano miakatra fitsarana a été récupéré chez Newsmada.
Tapitra hatreo ny hamehana ara-pahasalamana, araka ny tatitry ny Filankevitry ny minisitra, tamin’ny zoma 3 septambra lasa teo. Tsy midika ho fahafahana tsy hanaraka ireo fepetra sakana ara-pahasalamana napetraka intsony anefa izany, araka ny fanazavan’ny avy ao amin’ny minisiteran’ny Fahasalamambahoaka sy ny Prefektioran’ ny tanànan’Antananarivo. Mitohy ny ady amin’ny valanaretina Covid-19 ka hosaziana ireo tsy manao arovava sy orona eny andalana, izay efa ajanon’ny ankamaroan’ny olona ny manao azy, amin’izao fotoana izao. “Mbola eny amintsika eny ihany ny aretina fa tsy mbola resy tanteraka matoa mbola misy tranga vaovao isan’andro. Hiteny ny Polisimpirenena sy ny Zandary aho hanara-maso ireo olona tsy manao arovava sy orona eny an-dalana satria tsy mety raha avela fotsiny amin’izao. Ny fanajana ny elanelana no mety tsy ho voatana intsony”, hoy ny jeneraly Ravelonarivo Angelo, préfet-n’Antananarivo renivohitra. “Tsy maintsy tazonina ireo fepetra madinidinika, toy ny fanaovana arovava sy orona, fanasana tanana matetika indrindra rehefa misy ny fivorivorian’ny olona maro amin’ny toerana iray”, hoy Dr Rakotoarivony Manitra, talen’ny Fampiroboroboana ny fahasalamana ao amin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka. “Mila tohizana ihany koa ny fahazarana manatona toerampitsaboana hatramin’izay rehefa misy soritr’aretina. Efa misy, rahateo ny vaksiny, ka afaka misafidy ny tsirairay avy ho fisorohana ny tranga misy fahasarotana”, araka ny fanamafisan’itsy farany. An-kilany, tao anatin’ny roa andro, tamin’ny fitiliana sivy ambin’ny folo sy valonjato, tsy misy afa-tsy telo no nahitana trangana Covid-19. Iray no maty tao anatin’ny telo andro ka nampiakatra ny isa ho fito amby dimampolo sy sivinjato nandritra ny fisian’ny Covid-19 teto Madagasikara. Olona efatra, avy eto amin’ny faritra Analamanga no manana fahasarotana ankehitriny. L’article Fahataperan’ny hamehana :: Mitohy ny fanasaziana ireo tsy manao arovava sy orona est apparu en premier sur AoRaha.
Raboana Holijaona : “Laharam-pahamehana ny sosialim-bahoaka”
“Raha tena mandinika isika, efa mijery izay laharam-pahamehana ny fanjakana ary efa manao: miitatra tsikelikely ny hoe Kaly tsinjo, ny Vatsy tsinjo, ny fizarana vola. Efa ara-tsosialy tsy nisy nanao hatramin’izay naha Madagasikara an’i Madagasikara ireny.” Izay ny fanehoan-kevitry ny filohan’ny fikambanana Emergence de Madagascar, Raboana Holijaona, manoloana ny tsikera fa tsy mijery ny sosialim-bahoaka ny fitondram-panjakana. Ao anatin’ny laharam-pahamehan’ny fanjakana amin’izao ny sosialim-bahoaka.Tsara raha mba manana ny laharam-pahamehany koa ny mpanohitra: inona ny atao hoe laharam-pahamehana aminy, inona ny fandaharanasany, inona ny tetikasa lehibe tokony hatao eto Madagasikara? Raha hitsikera fotsiny ny tena fa tsy misy vahaolana ahazoana manana fototra amin’izany: mila mamaky ny fandaharanasam-panjakana. Nivoaka ny Drafitra fanandratana an’i Madagasikara (PEM), misy laharam-pahamehana mazava ary mifanaraka amin’ny fenitra iraisam-pirenena sy ny PEM.Tsy maintsy miaro ny vahoaka ny fanjakana“Raha ao anatin’ny sehatra misy mikorontana, ohatra, miaro ny vahoaka sy ny fananany tsy hisian’ny korontana na ny fandrobana ny fanjakana”, hoy kosa izy momba ny fitandroana filaminana manoloana ny hetsiky ny mpanohitra. Heverina fa toy izay avokoa ny tranga manerana izao tontolo izao: tsy maintsy miaro ny vahoaka sy ny fananany ny mpitandro filaminana. Fomba fanao izay, na aiza na aiza tany sy fanjakana. Tsy misy hiteny hoe jadona izany. Tsy maintsy miaro ny ataon’ny fanjakana rehefa misy ny tokony harovana amin’ny vahoaka sy ny fananany.Ara-dalàna sy anatin’ny fenitra fahafahana miteny ve ny manompa, manao fanalam-baraka, miteniteny foana, milaza lainga…? Izay no olana fa tsy misy manakana hoe tsy mahazo miteny sy mitsikera ny fitondram-panjakana ny mpanohitra. Rehefa tafahoatra loatra izay, tsy maintsy mandray andraikitra ny fitondram-panjakana mba tsy hiditra amin’ny fifankahalan’ny samy Malagasy.R.Nd. L’article Raboana Holijaona : “Laharam-pahamehana ny sosialim-bahoaka” a été récupéré chez Newsmada.